၀ ယ်ယူရန်ရွေးချယ်စရာကောင်းသည့်ဘက်ထရီကောင်းသည့်စမတ်ဖုန်း ၅ ခု | Androidsis
Elvis bucatariu | | ဘက်ထရီ, မိုဘိုင်း
သင်ရှာနေတယ်ဆိုရင် စွမ်းဆောင်ချက် မှလွဲ၍ ကောင်းမွန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပေးသောကောင်းမွန်သောမိုဘိုင်းဖုန်း, ဒီ post အတွက်ကျနော်တို့ကဆက်ဆံရေးမှကြွလာသောအခါသင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအချို့ကိုတင်ပြသွားကြသည် အဘိုး.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုစီသည် ၎င်းသည်စျေးနှုန်းနိမ့်ခြင်းသာမကသင့်အားနှစ်ရက်ကြာအသုံးပြုမှုကိုအာမခံနိုင်မည့်၎င်း၏ကြီးမားသောဘက်ထရီများအတွက်လည်းကောင်းသော ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုလက်လွတ်မသွားပါစေနှင့်။ သူတို့၏စျေးနှုန်းနှင့်အဓိကစရိုက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည်။
2 Xiaomi က Redmi 4A
3 Meizu M6 မှတ်စု
နာမည်အရ MEIIGOO S8 သည်အခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်သည် တစ် ဦး ကိုယ်ပွား က galaxy S8 အရာက Samsung အထင်ကရတစ် ဦး အားကြီးသောအကြံအစည်သမုတ်သောကအနည်းငယ်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုမှလွဲ။ ၎င်း၏ ၆.၁ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်ပိုမိုကြီးမားသည် Resolution 2160 x 1080 Pixels ကိုအသုံးပြုထားပါသည်။
ဤ terminal တွင် 4G ကွန်ယက်များအတွက်အထောက်အပံ့ရှိပြီးရှစ် core Core MediaTek MT6750 ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည် RAM ကို4GB အထိနှင့်အတူ internal memory 6GB microSD ကဒ်ပံ့ပိုးမှု နှင့် 3300mAh ဘက်ထရီ ကြောင်းအားဖြင့် loaded ဖြစ်ပါတယ် USB-C port.
MEIIGOO S8 နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာက၎င်းကိုယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည် ရေစိုခံ နောက်ကင်မရာက 13 megapixel +5megapixel ရှိပါတယ်။
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် MEIIGOO S8 ကိုဝယ်ပါ
Redmi 4A သည်အနိမ့်အကွာအဝေးအတွက်အာရှကုမ္ပဏီကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးကစားနည်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာမြင်တွေ့ရသည့်အကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။2GB RAM တပ်ဆင်ထားပြီး 32 GB ROM တပ်ဆင်ထားပါတယ် Qualcomm Snapdragon 425 1,4GHz Quad Core။ ၎င်း၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည် 3.120 mAh ဘက်ထရီ ဖုန်းကိုအားသွင်းစရာမလိုဘဲ ၂ ရက်အထိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားသည်။ ကင်မရာအဆင့်တွင်2fps အဓိကကင်မရာတပ်ဆင်ထားပြီးf/ 13 aperture ပါ ၀ င်ပြီး LED flash လည်းတပ်ဆင်ထားသည်။
Xiaomi Redmi 4A ကိုဝယ်ပါ
Meizu M6 မှတ်စု
အကြောင်းပြောနေတာအခါ ကြီးမားတဲ့ဘက်ထရီနှင့်အတူစျေးပေါမိုဘိုင်း, MEIZU M6 Note ကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းတွင်မပျောက်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည် ၅.၅ လက်မ IPS LCD မျက်နှာပြင်နှင့် Full HD resolution တို့ပါ ၀ င်သည့် terminal ဖြစ်သည် နောက်ဖက်ကင်မရာ 12 MPx +5MPx 16 megapixel ရှေ့ကင်မရာ၊ 3GB RAM နှင့် 32GB သိုလှောင်ရန်နေရာ အချက်အလက်များ၏။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Meizu M6 Note သည် Bluetooth 4.2 ဆက်သွယ်မှု၊ 4G LTE ကွန်ယက်များအတွက်အထောက်အပံ့၊ လက်ဗွေဖတ်စက်နှင့် 4000mAh ဘက်ထရီတို့ပါ ၀ င်သည်။
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် MEIZU M6 Note ကိုဝယ်ပါ
Lenovo ZUK Z1 သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များစွာရှိသောစျေးပေါသောမိုဘိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယထောက်ခံချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အတော်အတန်မသိသော terminal တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအမှန်တရားမှာ၎င်းအားသွင်ပြင်လက္ခဏာများကသင့်ကိုလျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။
၎င်းသည် 4G terminal တစ်ခုဖြစ်သည် 4100mAh ဘက်ထရီ၊ 3GB RAM၊ 64GB သိုလှောင်မှုနေရာလက်ဗွေဖတ်စက်၊ ၅.၅ လက်မ Full HD မျက်နှာပြင်နှင့်နောက်ကင်မရာ 5.5-megapixel တို့ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် Lenovo ZUK Z1 ကိုဝယ်ပါ
Android 7.0 Nougat ပါသော terminal တစ်ခု၊ DOOGEE BL5000 သည် 5050mAh ဘက်ထရီနှင့် 4GB RAM ပါ ၀ င်သောအရာအားလုံးနှင့်အတူထင်ရှားသည်။။ ထို့အပြင်ဤမိုဘိုင်းတွင် Samsung ၏ Galaxy S8 စီးရီးများမှုတ်သွင်းထားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဒီဇိုင်းလည်းရှိပြီး 13-megapixel ပင်မအာရုံခံကိရိယာနှင့်ရှေ့ကင်မရာ 8-megapixel ပါသည့်နောက်ဘက်ကင်မရာနှစ်မျိုးတပ်ဆင်ထားသည်။
မျက်နှာပြင်နှင့်ပတ်သက်လျှင် DOOGEE BL5000 သည်ဆောင်ရွက်ပေးသည် Full HD resolution ဖြင့် ၅.၅ လက်မ ISP LCD မျက်နှာပြင် နှင့် 2.5D ကွေးဖန်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် DOOGEE BL5000 ၏စျေးနှုန်းကိုအောက်ပါလင့်ခ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
DOOGEE BL5000 ကိုအကောင်းဆုံးစျေးဖြင့်ဝယ်ပါ
HOMTOM HT50 သည် ၅၅၀၀mAh ဘက်ထရီကြောင့်စျေးကွက်တွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အပြည့်ဆုံးသောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလွန်ကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်းနှင့် HD resolution ဖြင့် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်၊ နောက်ဖက်နှင့် 5.5-megapixel ကင်မရာ၊ လက်ဗွေဖတ်စက်နှင့် 13G ဆက်သွယ်မှုများပါရှိသည်။
HOMTOM HT50 ၏အခြားထူးခြားသောလက္ခဏာများမှာထိုအရာဖြစ်သည် သင့်ရဲ့ဘက်ထရီကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်၎င်းတွင် internal memory ပါဝင်ပြီး 32GB နှင့် RAM 32GB ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းသည်ပရိုဆက်ဆာသည် MediaTek MT6737 ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်တင်ပြခဲ့သမျှတွင်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်လည်းဖြစ်သည် စျေးအသက်သာဆုံးတစ်ခု, ယူရို ၈၀ ထက်မပိုသော ၀ ယ်ယူနိုင်သည့်အတွက်အောက်တွင်တွေ့နိုင်သောအထူးလင့်ခ်မှတစ်ဆင့်အထူးလျှော့စျေးဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် HOMTOM HT50 ကိုဝယ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » ကောင်းမွန်သော ၀ ယ်ယူရန်ရွေးချယ်စရာကောင်းသောဘက်ထရီပါသည့်စမတ်ဖုန်း ၆ လုံး
ULEFONE POWER II ၏သားရဲကိုသင်ဘယ်နေရာမှာထားခဲ့သလဲ။
"Big battery" သည် 4000mAh နှင့်အထက်ဖြစ်သင့်သည်။
ငါ၌ 3000 mAh ဘက်ထရီပါသောဆိပ်ကမ်းများစွာရှိခဲ့ပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်တစ်နေ့တာမျှသာဖြစ်သည်။
အဲဒီစာရင်းထဲမှာ ၅၀၀၀-odd battery ရှိတဲ့ Lenovo P2 terminal ကိုငါပျောက်နေတယ်၊ ​​လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတည်းကရှိခဲ့ရင် ၃ ရက်လုံးလုံးရှုပ်ထွေးနေတယ်။
Ulefone တွင်ကျွန်ုပ်တွင် Ulefone ပါဝါ၊ ဘက်ထရီ ၆၀၀၀ နှင့်အတူတူပင် ၃ ရက်ထက်ပိုမသွင်းဘဲသုံးစွဲထားသည်။
Asus Zenfone Max သည်ဘက်ထရီ ၅၀၀၀ ပါဝင်သည်။
BQ Edison 10 နှင့် BQ Aquaris E3 နှိုင်းယှဉ်ခြင်း